China Electric Hammer malite ịgba 28mm Zh2-28 factory na suppliers | Zhonghan
Electric Hammer malite ịgba 28mm Zh2-28
Ọrụ dị mfe, mkpọpu ngwa ngwa, kwesịrị ekwesị maka ọrụ na-aga n'ihu
Mgbapu ala ọnụego na-eduga na klas nke 3 n'arọ hama akuakuzinwo
Onwem na mgbanwe mgbanwe Chuck
50 mm spindle ring diamita, siri ike karị
Oke mkpọpu dayameta (nchara):
Oke mkpọpu ala dayameta (osisi):
Oke mkpọpu dayameta (ihe):
Oke mkpọpu dayameta brik (na oghere ntakịrị):
Oke otu igbu ike:
0-1300 agba ọsọ
0-5100 ugboro / min
3.2 joules (dabere na ọkọlọtọ EPTA)
Nlekọta nyocha ahụ kwesịrị iru ihe ndị a:
1. Ọ dịghị mgbape ma ọ bụ mmebi na shei na ahụ;
2. Eriri eriri na plọg na-emebibeghị, mgba ọkụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, yana njikọ njikọta efu bụ ihe ziri ezi, kwụsie ike na ntụkwasị obi;
3. Ihe mkpuchi nke akụkụ nke ọ bụla zuru ezu ma sie ike, na ngwaọrụ nchebe eletrik nwere ntụkwasị obi.
Nke abuo, mgbe akụrụngwa akụrụngwa malitere, ọ ga-agba ọsọ na-enweghị ibu, na njikọ njikọta akụrụngwa igwe kwesịrị enyocha ma kwenye na ọ na-agbanwe agbanwe na enweghị nsogbu. Mgbe ị na-arụ ọrụ, onye na-esote ya kwesịrị ịkwụsi ike, na etinyeghị ike karịrị akarị.
3. Ngwunye eletriki ma ọ bụ aka hama kwesịrị ịmalite n'oge ọrụ ahụ, a ga-emerụkwa mkpọpu ala ahụ megide ọrụ ọrụ nke rivet pụrụ iche tupu ịwa ahụ, mgbe ahụ, a ga-ebugharị ya na ike na-agafeghị oke iji zere ịma jijiji; ọ bụrụ na ọsọ ahụ na-ada ngwa ngwa, a ga-ebelata ike iji gbochie mbugharị moto ahụ. Buru nrụgide.
Nke anọ, mgbe ị na-egwu ala, ị kwesịrị ị paya ntị iji zere mkwado na ihe.
Nke ise, igwe ọkụ eletrik na igwe ọkụ eletrik bụ 40% na-arụ ọrụ oge niile, ọ nwere ike ghara iji ya rụọ ọrụ ogologo oge.
Nke isii, mgbe oghere ọrụ na-arụ ọrụ karịrị 25mm, a ga-enwerịrị usoro ịrụ ọrụ siri ike, a ga-edobe usoro nchebe.
Asaa, overloading amachibidoro kpam kpam. Ekwesiri ilebara anya na ụda na ịrị elu okpomọkụ n'oge ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na achọtaghị ihe ọ bụla, akụrụngwa ahụ kwesịrị mechie ma lelee ya ozugbo. Mgbe oge ọrụ dị ogologo, na ịrị elu okpomọkụ nke igwe ahụ karịrị 60 Celsius C, a ga-akwụsị igwe ahụ, ma rụọ ọrụ ahụ mgbe emechara obi jụrụ.
9. N'oge ị na-arụ ọrụ, emetụla ọkụ ọkụ eletrik aka, jiri aka gị nwụọ ma na-egweri. Ọ bụrụ na achọpụta na ọ masịrị ma ọ bụ mebie emebi, ị ga-akwụsị igwe ozugbo iji rụkwaa ma ọ bụ dochie ya, wee ga n'ihu ọrụ ahụ.
Ngwa ndapụta nke electric hama
Ọtụtụ-eji na-ewu, mma na ndị ọzọ ọrụ, adabara ihe, Brick mgbidi, nkume, wdg
Ọrụ igwe eletriki eletrik - Site na mmetụta (usoro CAM).
Adabara ihe, brik mgbidi, nkume mmetụta mkpọpu ala na osisi, metal, Efere tile mkpọpu ala ọrụ
Ajịrịja nkume gbajiri agbaji
oghere chisel groove
Anuahade nkume chisel mgbidi
Anuahade, nkume chizulu n'ala
Electric hama tụnyere ：
Ntinye 500W dị ike
Ekwela ka ngwaahịa ọjọọ dọrọ
mgbidi na-adịghị ike Motor adịghị inogide The mmanụ dị mfe ihihi.
Ngwaahịa anyị ga-edozi nsogbu a niile
Plastịkpọ oku Igbe
Nke gara aga: Electric Hammer 32mm Zh2-32
Osote: Rotary Hammer 24mm Zh-24 / zh2-24
Hammer malite ịgba Mk 24mm Zhm-24 / zhm2-24
Light Hammer malite ịgba 26mm Zh-26
Electric malite ịgba Machine 20mm Zh3-20
Hammer malite ịgba Mk 26mm Zhm-26 / zhm2-26